Madaxweynaha Dowladda Soomaaliya Ayaa Gobolka Banaadir U Magacaabay Gudoomiye Kuxigeen – Banaadir weyne
Madaxweynaha Dowladda Soomaaliya Ayaa Gobolka Banaadir U Magacaabay Gudoomiye Kuxigeen
[Bidix ilaa Midig] – Ibraahim Cumar Mahad Alle (Ibraahim Dheere) iyo Xuseen Maxamed Nuur
Muqdisho (WBW: The GBM) – Wareegto uu soo saaray Madaxweynaha Dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa waxaa uu ku sheegay in Ibraahim Cumar Mahad Alle (Ibraahim Dheere) uu u magacaabay Guddoomiye Kuxigeenka Gobolka Banaadir ee Arrimaha Maaliyadda, iyadoo uu xilkana ka xayuubiyay Xuseen Maxamed Nuur oo kamid ahaa kuxigeenada Maamulka Gobolka Banaadir.
Madaxweynaha iyo Wasiir Koowaadka Dowladda Soomaaliya ayaa waxaa caado u aheyd labadii sano ee lasoo dhaafay iney xilalka ka qaadaan mid, mid kalane ay u dhiibtaan xilka; iyadoo aysan jirinba wax ka dabo hadli karo marki ay qatifyo galaan.
Gudoomiyaha Baarlamaanka xitaa, ma jirto cid ka dabo hadli karto marki uu qatifyo galo; waxaana cad in Madaxda Sarsare ee Soomaaliya ay u tafoxeyteen Habkii Kelitaliska ahaa ee Jamhuuriyadda Soomaaliya u horseeday burburka maanta haaysto.
Gobolka Banaadir ee hada magaciisa isugu soo biyo shubtay Magaalo Madaxda Jamhuuriyadda Soomaaliya ee Muqdisho, ayaa waxaa ku nool dad tiradooda gaareyso 4 milyuun oo qofood. Iyadoo sidaas ah, ayey hadane Dadka Muqdisho aysan wax xuquuq ah aysan laheyn marki lala barbar-dhigo Dowlad Goboleedyada hada ka jiro Jamhuuriyadda Soomaaliya isla markaana qaarkood lagu saleeyay sedbuursiga.
Intaasi waxaa usii dheer Dadka Muqdisho, iyagoo laga maroogsanayo Gobolka Shabeelaha Hoose iyo Gobolka Shabeelaha Dhexe ee weligoodba ah Gobolka Banaadir; hadane lagu darsanayo waxa loogu magac-daray ‘Koofur+Galbeed’ iyo ‘Hir+Shabeele’.
Warbaahinta Banaadir Weyne (WBW: The GBM [The Great Banadir Media]) waxaa markasta lagala socon karaa wararka xiisaha leh.